Carbon Steel Flange, Stainless Steel Flange, Open Die nokuchengetedza - DHDZ
Shanxi DongHuang Wind Power Flange Manufacturing Co., LTD. Ko kuna gadzira, Export, Distribution uye Marketing pamusoro Flanges, Forgings, Accessories nezvimwe chokuita zvinhu nokuda Renewable Energy, Wind-Mill Plant, Oil & Gas Industries, Onshore, Offshore, Refinery, Petrochemicals, Water & WWTP, Food Processing Inds , Power & Shipbuilding Industries, Automotive.
20 MAKORE 'ZVAKAITIKA
80 NYANZVI STAFF AND mukoti
1000 + pamusoro FORGINGS
20000 T FORGINGS uye
FLANGES PER GORE
More pamusoro kambani yedu
Ndokugadzira Tube Sheet
Products uye Services
Isu, DHDZ, berekai flanges uye forgings maererano vanodhirowa, makemikari anoumba zvinodiwa nevanhu rakavhurika vanofa nokuchengetedza, kufa nokuchengetedza. Rough machine, kupisa kurapwa uye vapedza machine zvose zvinowanikwa. The vanonyatsokwanisa ndaisazombodya kupisa pakurapa flange, nokuchengetedza zvinhu rinosvika 97,8%. We pamwe takabatana masangano Cranes, peturu, makemikari, migodhi, simbi, hydraulics, coking, zvitima, injiniya michini, Magetsi, zvokudya kubudiswa, bepa, shipbuilding, zvokufambisa nezvimwewo, zvigadzirwa siyana mavhiri, pulleys, sprockets, rachulis, mhete rachulis, rin'i zvikamu, sepombi, miseve, sepombi, zvinogumbura, modules, kuti akatakura rutsigiro nezvigaro, etc. The zvigadzirwa yakavimbika mune zvinhu uye chezvipfuwo quality, uye ndave aivigirwa kunyika dzinopfuura 40 Worldwide.
Wind simba iri yakachena uye isina renewable simba kunobva. Wind simba zvinoreva kutendeuka mhepo kinetic simba kupinda magetsi simba. DHDZ anopa zvakasiyana siyana hombe dhayamita mhepo simba flanges. Chinhu STRUCTURAL nhengo unobatanidza chikamu chimwe nechimwe mhepo shongwe kana pakati neshongwe uye nomusimboti. Mashoko rakashandiswa mhepo simba flange yakaderera-chiwanikwa mukuru-simba simbi Q345E / S355NL. The kushanda kwezvakatipoteredza ane risingamboshandisi tembiricha kuti -40 ° C uye angakudzivisai kusvika 12 mhepo. Kupisa kurapwa kunoda normalizing. The normalizing kwacho anovandudza nzwisisika zvemaziso ehupfumi nemhepo simba flange nokuda kunoitwa sejecha, uniformizing chimiro, kuvandudza maumbirwo kuremara.
MAFUTA & Gas INDUSTRIES
The mafuta uye gasi industies zvinoda hwakavimbika flanges kuti nechokumusoro kwerwizi, yacho wave pakati uye Nechezasi kwendangariro. Pakuvaka izvi pamwero mukuru mapurojekiti, ari kushanda ezvinhu ndiwo akasiyana uye kunzwisisa, inosanganisira vazhinji nhau uye zvinhu. Kune vazhinji inokosha zvinodiwa kuti chatingatevedzera flanges nezvimwe Fittings. DHDZ rinopa flanges zvinodiwa kuti kurwisa kuti sulfide kushushikana cracking walnut (SSC) mu anovava Refinery kwacho enviroments, kureva, enviroments kuti ane nyoro rehydrogen sulfide (H₂S).
Railway zvinoriumba, Automotive, LATHE MACHINE
Drive miseve Anonyanyowanika kushandiswa tangi marori, mafuta marori, sprinklers, ngoro, mugwagwa Wreckers, zvemuchadenga basa motokari, marara marori, etc. Main Spindles Anonyanyowanika kushandiswa lather michina. DHDZ anopa zvakawanda ndokugadzira miseve nokuda Railway zvinoriumba, Automotive, Lathe Machine.
Starch, shuga ZVOKUDYA kugadzira INDUSTRIESE
DHDZ inopa customized forgings Somuenzaniso, 2Cr13 stator, kuti vabatsire Clients yedu dzinotsanagura dzaFord nokuda mbatatisi, zviyo starch, shuga zvinhu uye zvokudya kubudiswa kubereka yakatsiga uye vanopfeka nemishonga michina uye michina.
Shanxi DongHuang Wind Power Flange Kugadzira Co, LTD.
Kana uchifarira kutsanya, free akatorwa pamusoro flanges kana forgings
tapota inzwa wakasununguka ndinotaura Via Inquiry NOW.